Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Ukumkanikazi uElizabeth II walile ibhaso leOldie yoNyaka
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukumkanikazi uElizabeth II walile ibhaso leOldie yoNyaka.
U-Queen Elizabeth II wanyanzelisa ukuba "akahlangabezani neenqobo ezifanelekileyo" ngeli bhaso, kuba "umdala ngokuziva kwakho."
Iphephancwadi i 'The Oldie' lithathe uKumkanikazi uElizabeth II kwimbasa yemagazini ka-2021 Oldie of the Year.
Owona mlawuli mde waseNgilani ucebise ukuba 'iphephancwadi i-Oldie' kufuneka lijonge kwenye indawo.
Inkupho yokuqala yeli phephancwadi yapapashwa emva phaya ngo-1992, kwaye upapasho olo luye lwaxhasa isimbo salo se-idiosyncratic, sibhiyozela ukuguga kwinkcubeko egxile kulutsha.
I-Oldie, iphephancwadi lase-Bhritane eliphuma kanye ngenyanga elibhalelwe abantu abadala "njengenye indlela elula yokujonga iindaba kulutsha kunye nodumo", ubungqingili bukaKumkanikazi uElizabeth II emva kokumazisa ukuba ukhethelwe imbasa yemagazini ka-2021 ye-Oldie yoNyaka .
Ubungangamsha bakhe UElizabeth Elizabeth II uyalile iwonga awalinika abantu abadala ngezinto abaziphumezileyo, esithi “akazifezekisi iindlela ezifanelekileyo” kuba “umdala njengokuba uziva.”
Eli phephancwadi lapapasha impendulo kakumkani kuhlelo lwayo lwangoNovemba, nangona umyalezo ngokwawo ungo-Agasti 21.
Kwileta emifutshane enemigca emithathu, inkosi yaseNgilani eye yalawula ixesha elide yacebisa ukuba eli phephancwadi kufuneka lijonge kwezinye iindawo ukufumana “umntu ofanelekileyo.”
Usihlalo weembasa zika-Oldie, umbhali nokwangumsasazi uGyles Brandreth, uchaze ileta yokumkanikazi “njengethandekayo,” esongeza, esithi, "mhlawumbi kwixesha elizayo sizokuphinda sibuve ubuKhulu bakhe."
Umcimbi wokuqala Omdala yapapashwa emva ngo-1992, kwaye upapasho luye lwaxhasa isitayela sayo se-idiosyncratic, ukubhiyozela ukuguga kwinkcubeko egxile kulutsha. Kule minyaka idlulileyo, inikezele ngembasa ye-Oldie yoNyaka kubantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi abaye benza igalelo elikhethekileyo kubomi boluntu-ukusuka kwabo baphumelele u-Oscar ukuya kwizipho ze-Nobel, ukusuka kubongikazi bolondolozo loluntu ukuya kwiimbaleki ezigqala.
Umsitho walo mbasa walo nyaka - owokuqala ukubanjwa buqu ukusukela ngo-2019 ngenxa yobhubhane- wenzeka nge-19 ka-Okthobha kwihotele i-Savoy, kunye nomolokazana wenkosi iiDuchess zaseCornwall babonisa amabhaso. Phakathi kwabo bathe banikwa iwonga le-2021 Oldie yoNyaka ngo-Delia Smith, uBob Harris, uBarry Humphries, uMargaret Seaman, uRoger McGough, uGqr Saroj Datta, uGqirha Mridul Kumar Datta kunye noMhlekazi uGeoff Hurst.
UElizabeth Elizabeth IIUmyeni ongasekhoyo, iNkosana uPhilip, kwathiwa ngu-Oldie wonyaka ngo-2011. Kwileta yakhe yombulelo, waqhula wathi: “Ayikho into efana nale yokuba kukhunjulwe ukuba iminyaka iyahamba - ngokukhawuleza kakhulu - kwaye baqala ukuhla kwisakhelo samandulo. ”
Ukumkanikazi olawulayo, oza kuba setroneni yaseBritane iminyaka engamashumi asixhenxe ngo-2022, usenexesha elixakekileyo. NgoLwesibini, ubambe abaphulaphuli ababini ngekhonkco levidiyo, ebulisa oonozakuzaku baseJapan kunye nabase-EU, ngaphambi kokuba abambe umsitho kwiNgqungquthela yeHlabathi yoTyalo-mali eWindsor castle.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 45
Usetyenziso olungakumbi nge- العراق دردشة العراق